China Iinkuphelostencils Tyre Korea Butyl ngaphakathi ityhubhu 11.00-20 mveliso kunye nabenzi | Umgangatho
Material: Butyl ngerabha
Ivelufa: TR15, TR78A, TR179A
Amandla eqine: 6.5mpa 7.5mpa 8.5mpa
Igama lebrand: I-Florescence
Iphakheji: 30pcs / ibhokisi
30pcs / ibhokisi
Iinkuphelostencils Butyl Inner Tube 11.00-20
Tshatisa iintlobo ezahlukeneyo zevalufa ngokweemfuno zabathengi
Ukuhanjiswa kunye nePakeji
Zimbini iindlela zokupakisha: ibhokisi kunye nebhegi ephothiweyo.
Ukupakishwa komntu ngamnye: ingxowa yeplastiki ebonakalayo okanye ibhegi yombala.
Ad Uncedo lwethu
1. ikakhulu ithunyelwa butyl yerabha ityhubhu yangaphakathi kangangeminyaka engama-28.
2. Umbhobho wangaphakathi unokuqina komoya ophezulu, ukutyeba kunye nokuxhathisa ukunxiba
3. Zonke iimpahla ziya kuba nokuhlolwa ngokunyuka kwamaxabiso emoyeni iiyure ezingama-24 iziqwenga ngaphambi kokuthunyelwa.
4. Iqela leengcali kunye nomgangatho wemveliso ezinzileyo.
5. Uluhlu olubanzi lweentlobo ezahlukeneyo zezivalo ukuhlangabezana neemfuno ezivela kwiimarike ezahlukeneyo.
6. Ityhubhu yangaphakathi inengxelo entle kubathengi.
Qingdao Florescence Co., Ltd.is butyl yobungcali umenzi ityhubhu yangaphakathi kunye neminyaka engaphezu kwama-28 ukuvelisa amava China. Ikakhulu iimveliso kubandakanya ityhubhu yerabha yetyhubhu ngaphakathi iityhubhu kunye neflab yerabha.
Inkampani yethu inabasebenzi abali-120 (kubandakanya iinjineli ezisibhozo eziphezulu, ama-70 aphakathi kunye nabasebenzi abaqeqeshiweyo kunye nabasebenzi bezobuchwephesha), elilelona likhulu lemveliso kwimveliso enye e-China kwaye inokuhlangabezana nomyalelo ongxamisekileyo wabathengi.
Ngapha koko, iimveliso zethu zapasisa i-ISO9001: isiqinisekiso sika-2008 kwaye sineenkqubo zolawulo lwangoku nezenzululwazi ezibonelela ngeemveliso ezikumgangatho ophezulu kunye neenkonzo ezinoxanduva.
Sijonge phambili ekusekeni ubudlelwane bexesha elide kunye nolwalamano kunye nabathengi bethu.
◎ Umboniso neQela
NdinguCassie, ndingathanda ukwakha ubunyani bexesha elide ngokubhekisele kwinzuzo yokuhlangana nawe. Wamkelekile ukuza kuthi, nayiphi na imibuzo yakho iya kuphendulwa kwisithuba seeyure ezingama-24.
Nawuphi na umbuzo nceda undazise ngokukhululekileyo, ndiya kuhlala ndikwinkonzo yakho ^ _ ^
I-QINGDAO FLORESCENCE, UKUKHETHA KWAKHO KAKHULU !!!
Idibanisa: Igumbi le-1608, iDingye International Mansion,
Inombolo ye-54 eMoscow Road, eQingdao iZowuni yoRhwebo lwaSimahla, China
Egqithileyo 1000R20 1000-20 Iinkuphelostencils iTire Lwangaphakathi Tube
Okulandelayo: I-Butyl yemoto engaphakathi kwiTyhubhu 175 / 185r14 yeCar Tire
Icandelo lezolimo leButyl Inner Tube
Ibhayisekile Ibhotile engaphakathi
Ibhayisekile Ibhotile yangaphakathi
Uvimba Butyl Inner Tubes